Hindiya: nin loo xiray inuu gabdho ku wasay waddooyinka - iftineducation.com
Hindiya: nin loo xiray inuu gabdho ku wasay waddooyinka
aadan21 / January 9, 2017
iftineducation.com – Hindiya: Majaajileeste loo xiray inuu haween ku dhunkaday waddooyinka
Sumit Verma ayaa nafsadiisa ay halis ku jirtaa ka dib markii uu sameeyay muuqaal uu ku dhunkaday gabdho si uu u sameeyo majaajilo.
Booliska magaalada Delhi ayaa hadda wada baaris ku saabsan muuqaalkan uu soo dhigay bartiisa Youtube-ka waxayna sheegeen in ay qabanayaan dacwadaha gabdhaha uu falalkaasi kula kacay.
Sumit ayaa raaligelin ka bixiyay wuxuuna meesha ka saaray dhammaan muuqaaladii uu geliyay bartiisa Yoputibe-ka isagoo gabdhaha shuminaya.
RIIX HALKAAN KA DAAWO ASOO GABDHO BAASHAALINAAYO WADOOYINKA
Mr Verma ayaa soo dhigay bartiisa muuqaaladan xilli ay jiraan warar sheegay in kufsi lagula kacay haween ku sugnaa magaalada Bangalore oo ku taalla koofurta Hindiya maalmihi loo dabaal degayay sanadka cusub.
Waxaa ku xiran bartiisa Youtube-ka oo lagu magacaabo ”Crazy Sumit” inka badan 150,000 kun oo qof. Wuxuu sheegay in muuqaaladaasi uu u sameeyay si uu dadka u majaajileeyo balse uusan uga dan lahayn inuu dad ku dhibaateeyo.
Nokiya oo soo bandhigtay telefoonkii Nokia 6 Android ee ugu horeeyay